Jordania: Ny Fanomboham-Piainana Vaovao Ho An’i Dwwen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2017 10:23 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, عربي, English
Tony tamin'ny fiandrasana ny fanambarana mikasika ny lahatra ho an'ny bilaogy mpanangom-baovao Arabo malaza Dwwen ny bilaogera Arabo . Nomena ny fanazavana rehetra taorian'ny fanjavozavoana kely ary raharaha toy ny mahazatra ho an'ilay tranonkala izay mamory ireo bilaogera Arabo mamoaka lahatsoratra amin'ny teny Arabo sy Anglisy eo ambany tafo iray izany.
Nanambara ilay mpandrafitra tranonkala sady bilaogera Jordaniana Tariq Abu Zaid fa omaly no andro farany ho an'ny tranonkala. Nanoratra izy [Ar] he:
Hikatona amin'ny 15 Jona 2008 ny Dwwen noho ny tsy fahafahanay manohy ny asanay intsony ao amin'ny tranonkala noho ny tsy fisian'ny fanohanana ara-bola. Manao antso ho an'ireo rehetra izay efa nampiasa ny fitaovanay na mifandray aminay mba hamafa ny rohy satria tsy ho hita intsony izany aorian'io daty io. Misaotra ireo rehetra izay efa nanohana ny Dwwen.
Iray amin'ireo bilaogera maro naneho ny hakiviany ihany koa i Hala avy any Jordania,. Nanoratra izy:
باح اليوم، كان أول موقع زرته هو دوّن، ليس فقط لأتابع آخر مستجدات المدونات كما اعتدت دوماً، بل أيضاً لأعرف إن كان هناك أخبار جديدة حول توقف الموقع، وهو الموضوع الذي أزعجني جداً عندما سمعته حيث أن دوّن كان دوماً المصدر الأساسي لمعظم المدونين، ودليل المدونات الرئيسي الذي يتابع المدونون
Ny Dwwen no tranonkala voalohany notsidihako androany raha tsy nanaraka ny fivoaran-draharaha farany amin'ny bilaogy toy ny mahazatra ahy aho, fa nikaroka ihany koa raha misy vaovao momba ny fanakatonana ny tranonkala. Tena nanelingelina ahy izany resaka izany satria ny Dwwen no loharanom-baovao voalohany ho an'ny ankamaroan'ny bilaogera sy tahirin-kevitra lehibe indrindra ho an'ireo izay manaraka ny bilaogera sy ny lahatsoratra navoakan'izy ireo avy amin'ny firenena samihafa.
Nisintona ny alahelo rehefa nisy ny fanambarana tsotra tao amin'ny bilaogin'ny Dwwen [Ar]:
Manohy ny asany indray ny Dwwen . Araho eto ny fivoaranay farany.